यी ११ सपना देख्नुभयो ? परिवार तथा आफन्तमा आउनसक्छ गम्भीर संकट – Jagaran Nepal
यी ११ सपना देख्नुभयो ? परिवार तथा आफन्तमा आउनसक्छ गम्भीर संकट
काठमाडौँ । राति सुतेको बेला हरेक मान्छेले सपना देख्ने गर्छ । भने सपनाले जीवनमा घट्ने अनेकौ घटना वा कुराको संकेत गर्दछ । कतिपय व्यक्तिको सपना पुग्ने पनि गर्छ । कसै–कसैले देखेको सपनाको ठिक विपरित पनि हुन जान्छ।
सपनाले मानिसको मृत्युबारे पनि अगाडी नै संकेत गर्दछ । धेरै मानिसहरुको भनाइमा, कोही नजिकका, आफन्त तथा प्रियजनहरुको मृत्युको अगाडी अनौठो सपना देखिन्छ। धेरै मानिस जम्मा भएको, कोही नचली ढल्केर बसेको सपना देखेको केही दिन पश्चात प्रियजनको मृत्युको खबर आइपुग्छ। मृत्युको सपना, मरण अनि वियोग सबैभन्दा दुखद् क्षण हुन।
याद गर्नुहोस् कुनै मानिसको मृत्यु भन्दा अगाडी यी ११ सपना देखा पर्दछन्।
१) कालो रंग
अर्थ लागाउन गाह्रो संकेत हो सर्प। फरक-फरक संस्कृति अनुसार फरक फरकनै धारणा छ सर्पको बारेमा। भयाकन डरको संकेत देखि ज्ञान र शान्तिको पनि अर्थ लगाइन्छ सर्पलाइ लिएर।
३) कालो बिरालो
४) दाँत झर्नु
५) कालो चरा
६) बच्चाको स्याहार
७) डुब्न लागेको मानिसलाइ बचाउदा
८) यात्राको योजना
९) दोहोरिने सपना
१०) नाच्नु अनि गाउनु
११) एक्लै पिउनु